Malunga nathi - iZhongshan City Jiawang Metal Products Co., Ltd.
Zhongshan City Jiawang Metal Products Co., Ltd. yi
Iingcali kuyilo kunye nokuvelisa i-stainlIsitshi ekhitshini yentsimbi, ebekwe kwiDongfeng Idolophu, isiXeko saseZhongshan, kwiPhondo laseGuangdong.
Sinomzi-mveliso wethu wokubumba ukuze sikwazi ukuqhubekeka neshishini elikhulayo kwaye sihlangabezane neemfuno zeemodeli ezintsha. Okwangoku, ngaphezu kwe-100 leemodeli ezahlukeneyo zinomzi-mveliso wethu.Kanti sisaqulunqa ngaphezu kweemodeli ezintsha ezingama-20 minyaka le.
Asinikezi kuphela ikhitshi elisinki, kodwa kwanemibono yabathengi bethu.Ubudlelwane beshishini bexesha elide kunye nokuphumelela buqhutywa kakhulu kwinkampani yethu.Choose Jiawang, ukhetheyourdevelopingbusiness.
Umbono wethu: Ukwenza imveliso engabizi kakhulu
qhubeka Ukumamela kunye nokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi, ukukhokela kunye nokugqitha iimfuno zabasebenzisi, kwaye uphumelele i-theuluhlu lwabasebenzisi;
Ngokuphakamisa umgangatho wamashishini kunye nomfanekiso wegama, ukuze abasebenzi abanoluvo oluphezulu lwe imbeko neqhayiya, phumelela abasebenzi ngentlonipho ;.
Ukukhuthaza uphuhliso olusempilweni lomzi-mveliso we-Intanethi, kunye namaqabane ukukhulisa nokuphumelela kushishino imbeko;
Gxila kuxanduva lweshishini, ukhathalele uluntu, ubuyisele eluntwini, uphumelele Intlonipho ekuhlaleni.
Ixabiso leNkampani: Ubungcali, ukuzinikezela, ukuDibana, kunye nokuBusa
● Ukwenziwa kwezinto ezintsha ezijolise ekwenzeni ixabiso kubathengi;
● Wonke umntu angayila, yonke into ingayilwa;
● Unomdla wokuzama, ungoyiki ukusilela, kuhle ukushwankathela
Ifilosofi yeshishini: Ixabiso labo bonke aBasebenzisi
Gxila kuphuhliso lwexesha elide hayi ngenxa yokuba nomdla kwishishini elilimaza umsebenzisi, Inkxalabo kunye nokuqonda okunzulu kweemfuno zabathengi, kunye nokugqwesa kwimveliso kunye neenkonzo zokuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi;
Ukubaluleka konxibelelwano lweemvakalelo nabasebenzisi, ukuhlonipha amava omsebenzisi, ukukhula kunye abasebenzisi.
Umsebenzi wethu: Ukubonelela abaThengi ngeinkcitho ezingenaxabiso, ukongeza ixabiso kwiMveliso zethu kunye nokuphucula inkonzo
Yenza iimveliso kunye neenkonzo ukuthuthuzela kunye nokunandipha abantu;
Ukugxila kwimimandla eyahlukeneyo, amaqela ahlukeneyo, izinto ezahlukeneyo kunye nokubonelela ngeemveliso neenkonzo ezahlukeneyo;
Yenza iqonga elivulekileyo kwaye liphumelele, lisebenze kunye namaqabane ukwenza imeko esempilweni ye-Intanethi.